Gawaari dagaal oo ciidamo huwan ah looga gubay duleedka Kismaayo. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Gawaari dagaal oo ciidamo huwan ah looga gubay duleedka Kismaayo.
On Apr 11, 2018 210 0
Waa Sarkaal Ameerikaan ah oo la socoda saraakiil Soomaali ah oo Buula-Guduud soo gaaray.
Ciidamo huwan ah oo isku dayay iney dhaq dhaqaaq ciidan ka sameeyaan deegaannada dhaca duleedka magaalada Kismaayo ayaa la kulmay weerar culus oo uga yimid dhanka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Dagaalkan oo ahaa mid kulul la iskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaa khasaare culus dhabarka loogu saariyay ciidamada huwanta ahaa oo ka koobnaa Maraykan, Kenyaati iyo Soomaali.
Warar ay heleyso Idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waxay xaqiijinayaan in ciidamada Maraykanka laga gubay gaari dagaal, halka kuwa Kenyaatigana sidoo kale laga gubay mid kale, waxaana la rumeysanyahay in gawaaridasa gubatay ay saarnaayeen ciidamo katirsan Shisheeyaha.
Mar weliba oo ciidamada Maraykanka iyo kuwa la jira ay isku dayaan iney dhaq-dhaqaaq ciidan ka sameeyaan duleedka magaalada Kismaayo oo ay ku yaalaan deegaanno lagu maamulo Shareecada Islaamka waxay la kulmaan ciidamadaas weeraro culus oo uga yimaada dhanka Mujaahidiinta, waxaana marar badan lagu qasbay in iyagoo jabay oo cararaya ku laabtaan Kismaayo.
Dagaallada ka dhaca duleedka Kismaayo waxaa si joogta ah uga qeybgala ciidamo Ameerikaan ah, kuwaas oo askar badan ku waayay dagaallada halkaas ka dhacay, inkastoo dowladda Maraykanka ay sheegto in ciidamadeeda jooga Soomaaliya ay howshooda tahay iney talooyin siiyaan Shisheeyaha iyo kuwa Soomaalida hadana waxay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab marar badan sheegtay iney fara saartay ciidamo Ameerikaan ah.